Induction Ukuqokelela intsimbi yentsimbi ngeebhambithi zokwenza indibano
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa kweeNkcazo / Induction UKWENZA I-Steel Rod End
Ukukhangela Ukufakelwa I-Rod Rod End
Udidi: Ukukhutshwa kweeNkcazo tags: Ukuphela kwentonga yentsimbi, iifotsholo zentsimbi, i-induction yentsimbi, induction yokuphelisa isinyithi, induction yokwenza ukukhula kwentonga yentsimbi, I-RF yokuqinisa intonga yensimbi
Ukuchithwa Kwakha I-Rod Rod Ekupheleni Kwamashishini Okushisa
Injongo Ukutshisa iincam zeentsimbi ukuya ku-1800ºF ngaphambi kokuba kwenziwe umsebenzi. Ukuqhubekeka kweentonga kubandakanya ukufudumeza, ukucofa kwiindawo ezimbini ziyafa ukwenza isiphelo sentonga, kunye nokufudumeza kokugqibela kwikhoyili yejelo ukuvutha iintonga kunye nokunciphisa uxinzelelo olwenziwe. Umthengi kufuneka asebenze ngeentonga ezahlukeneyo
ububanzi phakathi kwe-1/8 ″ kunye ne-1/2 ″. Iqondo lobushushu lentonga kufuneka libe ngaphezulu kwe-1400ºF embindini ngelixa umphetho ongaphandle ungaphakama ngo-1900ºF.
Izinto zentsimbi zentsimbi ezinobubanzi obahlukeneyo ukusuka kwi-1/8 ″ ukuya kwi-1/2 ″
Ukuphindaphinda 50 kHz
Izixhobo ze-DW-HF-45kW zikhupha umbane oqinileyo wombane kubandakanya indawo yokufudumeza ekude equlathe ii-capacitors ezi-2 ezimalunga ne-0.5 μF, kunye nokujika kwe-6 (3 ngaphezulu kwe-3) yohlobo lwekhoyili yohlobo.
Inkqubo I-DW-HF-45kW yokukhutshwa kombane oqinileyo kufunyenwe ukufezekisa ezi ziphumo zilandelayo:
Iziphumo • Zombini iindonga zentsimbi enobubanzi efikelela kwi-1800ºF kwimizuzwana engaphantsi kwe-5 njengoko kulinganiswa nge-pyrometer ebonakalayo.
I-1/2 ″ rod yayincitshiswe ziimpawu ezibonakalayo zentsimbi kunye nexesha elifunekayo lokuhambisa ubushushu ukusuka kumda wangaphandle webha ukuya embindini ukunyusa iqondo lobushushu ukuya kwi-1400ºF ngaphandle kokunyibilikisa umphezulu webha. Ubushushu be-1/8 ″ yokufudumeza intambo babunqunyelwe kukusebenza kobushushu kwi-80 kHz. Imivalo ebanzi enkulu ngokuthe ngcembe ishushu ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kuthintelo lokuqhutywa kobushushu.
Ukuchithwa kweeTyanium zeeTyunithi